London, Ontario, Canada: Salaadii jimcada markii latukadey masjidkaLondonmuslims ayaan dabaqa hoose ee masaajidka u degey si aan halkaas uga gato kabaab kaas oo ay keenaan dumar muslimiin ah, isla mar ahaantaana lacagta kasoo baxda lagu taageero masaajidka. Qaxwe [coffee] lacag la'aan ah ayaa halkaas yaal, oo maxaa kuudiidey inaad koob isku fiirisid [cabtid].
"walaal tani waa qaddar rabbi, waxaana aaminsanahay xukunka Ilaah ee waxba hakawelwelin"
Halkaas markii arrinitii mareysey ayaa dhankaa waxaa kasoo muuqday Abdullahi Nuur Salxaan oo si niyadsami ah u dhoola cadaynaya, Asalaamu caleykum kadib gacanta ayaan kasalaamay, xaqiiqadii aad ayaan uga naxay markii aan garwaaqsaday in gacantiisa midigta ah aysan ahayn sidii Ilaah u abuuray asalkii, waa gacan ELECTRORINC ah. Run ahaantii si niyad ah ayaan uga xumaaday in arrintaasi kudhacday, Abdullahi oo ah nin aad u iimaan badan ayaa yiri hadal macnihiisu ahaa ama u dhowaa "walaal tani waa qaddar rabbi, waxaana aaminsanahay xukunka Ilaah ee waxba hakawelwelin". Halkaas meel loo dhaafo maleh, waana heer aad u sarreeya oo iimaankiisa muujinaya.
Abdullahi N. Salxaan: Waxaan kashaqaynjirey macdaar Hilib Xalaal ah oo lagu magcaabo "50 Food Center Halal" oo kuyaal magaalada Sandiego, Califoria, USA. Waxaan markii hore ugu shaqynjirey "Part-Time" [shaqo xadidan]. July 6, 1999 ayaa la'iga dhigay "Full-Time" [shaqaale resmi ah]. Islam maalintaas ayaa dhibkani dhacay.
Dhanka kale waxaan u dacwoodey dawladda Canada si ay taageero iiga siiyaan sidii aan ku gashanlahaa gacantan 'ELECTRONIC' ama qalabka casriga ah ku shaqaysa. Waxaa markaas ay dawladda Canada igabixisay bar kamida lacgtaas oo dhammayd 10,000 [canadian dollar]. Inkasta oo aysan ii bedelikarin tii hore [ee rasmiga ahayd] laakiin waa i caawintaa. Waxaan ku qaadikaraa ilaa hal galaan [qiyaastii 2 kg] oo culays ah.